नोभेम्बर 7, 2016 नोभेम्बर 7, 2016 साइन्स इन्फोटेक0Comments काठमाडौं, कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लोडसेडिङ मुक्त
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । कुलमान घिसिङले आएको एक हप्तामै काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाए ! नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सधैँ निकाल्ने विधुतभार कटौतीको सूचना यस पटक भने फरक भएको छ ।
सधैँ विधुतभार कटौतीको सूचना मात्रै निकाल्ने प्राधिकरणले पछिल्लो एक सातादेखि अनौपचारिक रुपमा काठमाडौँ उपत्यकालाई विधुतभार कटौती मुक्त घोषणा गरेको छ । पर्याप्त विद्युत उपलब्ध भएर यस्तो घेषणा गरेको नभइ राजधानीमा उपलब्ध भएको विद्युतलाई व्यवस्थापन मात्रै गरिएको हो ।
उपलब्ध विद्युतलाई व्यवस्थापन गरेकै कारण विधुतभार कटौती मुक्त गर्ने अभियान साकार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि उपलब्ध विद्युत्को व्यवस्थापनमा सुधार नगरिएका कारण विधुतभार कटौतीको सूचना पटक पटक सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढी विद्युत् माग हुने साँझको समयमा करिब ३०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउने सरकारको र प्राधिकरणको योजनालाई साकार पार्न आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता रकम उठाउने कामलाई समेत निरन्तरता दिने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्नेसमेत प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । (रासस)
← प्रहरीको आग्रह एटीएम प्रयोगकर्तालाई पिनकोड परिवर्तन गर्न
अमेरिकाको राष्ट्रपति को होला ? अनुमान गर्नुहोस त । १) हिलारी क्लिन्टन २) डोनाल्ड ट्रम्प →
डिसेम्बर 15, 2016 डिसेम्बर 15, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
फ्रेवुअरी 8, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0